Horonantsary I Legend - Taona firy no hanaovana ny hetsika | TeraNews.net
mpanoratra Nikitin Eugenius Navoaka tamin'ny 16.01.2021
Lohahevitra mafana amin'ny tambajotra sosialy amin'ny fiandohan'ny taona 2021 ny vaksinin'ny COVID sy ny vokatr'izany. Ny mpanoratra ny lahatsoratra dia mandefa sary izay mampiseho ny mpilalao fototra amin'ilay horonantsary "I Legend a Legend". Ny sonia dia nilaza fa tamin'ny 2007 ny talen'ny horonantsary dia tsy nahalala ny ho avy. Mazava ho azy, ny fanontaniana lehibe ao amin'ny motera fikarohana Google - ny sarimihetsika "I am Legend" - amin'ny taona manao ahoana ny hetsika.
Inona ity sarimihetsika ity - "Legend aho"
Ho an'ireo izay mbola tsy nijery dia sarimihetsika utopia momba an'izao tontolo izao aorian'ny apokalifa. Ny sary dia mampiseho ny tontolontsika ato ho ato. Taorian'ny fisehoan'ny viriosy mahatsiravina dia niova ny fiovan'ny mponina rehetra amin'ny planeta. Sahabo ho 90% ny olona eto ambonin'ny planeta no maty, 9% no nivadika zombie matahotra ny hazavan'ny andro. Ary ny 1% amin'ireo olona tsy voan'ny virus dia tafavoaka velona ary samy mitady ny hifankahita. Aleo mijery indray mandeha toy izay mamaky ny famaritana. Sarimihetsika tsara ity - tsikombakomba, sary, fihetsika am-peo. Rehefa dinihina tokoa, Will Smith no mitana andraikitra voalohany.
Horonantsary "I am Legend" - amin'ny taona manao ahoana ny hetsika
Andao hiverina amin'ny tamba-jotra sosialy sy lahatsoratra ao aminy isika. Manome toky ireo mpanoratra ny sary fa mivelatra ny drafitry ny sary, araka ny nomanin'ny mpanoratra, tamin'ny 2021. Diso anefa izany fampahalalana izany. Ireto fitantarana manaraka ireto dia azo heno tsara rehefa mijery ny sarimihetsika:
Ilay viriosy kitrotro, noforonina hitsaboana homamiadana, dia nahafaty olona tamin'ny 2009.
Tsy nisy ny fanaovana vaksiny hiadiana amin'ny viriosy - ny tena mampiavaka azy no namolavola ilay sarimihetsika iray manontolo.
3 taona taorian'ny fiparitahan'ny viriosy (2012-2013 io) dia miezaka mitady fanafody ny mpilalao fototra (virtoaly amerikana amerikana).
Diso sy ny vokany ho an'ny psyche
Izany hoe, ireo lahatsoratra rehetra ireo amin'ny tambajotra sosialy dia sandoka... Tsy mazava ny zavatra tian'ny mpanoratra hotratrarina. Mampatahotra na mampifaly ny mpamaky. Ny sasany handray ny toerany amin'ny fomba maneso, fa ny hafa kosa mila fanampiana maika. Tokony hojerenao foana ny fampahalalana. Misy serivisy Google mahafinaritra. Anontanio amin'ny fikarohana - Sarimihetsika "I Legend a", amin'ny taona manao ahoana ny hetsika. Ary raiso ny valin'ny fanontanianao. Aleo ihany mijery ity sarimihetsika ity. Tena mahaliana sy mampianatra.
Etsy andanin'izay, ny sary hosodoko "I am a legend" dia misy fiafarana 2 samy hafa. Notapahina ilay antsoina hoe tapaka sy mahazatra. 5 minitra fotsiny, fa mandeha indray. Ekipa TeraNews no tia kokoa ny notapahan'ny tale. Rehefa dinihina tokoa, ny fiafarana faly amin'ny sarimihetsika dia tena tsara tokoa. Ary ireo mpankafy utopia sy mpankafy ny karazana hetsika dia tena ho tia ny kinova mahazatra. Hanao tsy misy mpanimba. Fijery faly.
Odiônika nomerika an'ny fatotra nomerika
Ny andian-tsarimihetsika Netflix Yasuke dia miandry ny mpijery azy
Ny volana super mavokely dia tranga voajanahary
Sound Of Metal - Academy Award ho an'ny Sound Best
Tsy mitovy amin'ny azy intsony i Zac Efron
Mortal Kombat 2021 dia mampanantena fa ho sarimihetsika masiaka indrindra amin'ity taona ity
Skuter elektrika Xiaomi Mi Mijia Electric Scooter
Telefaona fakantsary Sharp Aquos R6 miaraka amin'ny optika Leica
Fanavaozana Browser Mozilla Firefox tsy nahomby
Hadron Collider lehibe dia vonona hikaroka
Ny fanjanahana ny volana - ny dingana voalohany an'i Amazon
GAZ-51, izay manafaingana amin'ny 205 km / ora